प्रदेश नं. ५ को स्थिति : खाद्यान्नमा अगाडि, जलविद्युत्मा कमजोर | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार प्रदेश नं. ५ को स्थिति : खाद्यान्नमा अगाडि, जलविद्युत्मा कमजोर
on: April 13, 2018 प्रदेश समाचार
प्रदेश नं. ५ को स्थिति : खाद्यान्नमा अगाडि, जलविद्युत्मा कमजोर
रूपन्देही । प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले प्रदेशको समग्र अवस्थाबारे तयार पारेको स्थितिपत्र ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभाको १४औं बैठकमा बिहीवार आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिबारे तयार पारिएको ‘स्थितिपत्र’ सदनमा प्रस्तुत गरे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सम्हालेका छन् । प्रदेशको योजना आयोगले २ हप्ता लगाएर ‘स्टाटस पेपर’ तयार पारेको हो ।
प्रदेश नम्बर ५ गरीब प्रदेशको रूपमा देखिएको छ । यस प्रदेशमा गरीबी नेपालको औसतभन्दा बढी देखिएको हो । नेपालको औसत गरीब २५ दशमलव ६२ छ । प्रदेशको स्थितिपत्रमा २५ दशमलव ८ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा ३५ दशमलव ५ प्रतिशत गरीब छन् । त्यसपछि प्यूठानको गरीबी दर ३२ दशमलव २ छ । गरीबीको स्थितिमा प्रदेश नम्बर ५ चौथो बढी गरीब भएको प्रदेशमा देखिएको हो । अन्य जिल्लाको गरीबी २१ देखि २८ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
यस प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । हालसम्म यस प्रदेशबाट जम्मा २१ मेगावाट विद्युत्मात्र उत्पादन भएको छ भने २ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नौमुरे आयोजनाको सम्भाव्यता देखिए पनि उत्पादनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन र तेलहनमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस प्रदेशको उत्पादन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत रहेको छ ।
यस प्रदेशको झण्डै २१ दशमलव ६ प्रतिशत उत्पादन रूपन्देहीको छ । त्यस्तै, दाङको १३ दशमलव ७, कपिलवस्तुको १२ दशमलव ५, बाँकेको १२ दशमलव १, र बर्दियाको १० दशमलव २, नवलपरासीको ८ दशमलव २ र पाल्पाको ५ दशमलव ६ प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकी ५ ओटा जिल्लाबाट कुल उत्पादनमा ५ प्रतिशतभन्दा कम योगदान देखिएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।
दाङलाई तेलहन उत्पादनको पकेट क्षेत्र र अदुवाका लागि पाल्पालाई लिइएको छ । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका ३४ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तह छन् । प्रदेशको क्षेत्रफल १७ हजार ८ सय १० वर्गकिलोमिटर छ । यसले कुल नेपालको भूभागको १२ दशमलव १ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ ।
यस प्रदेशका १४ प्रतिशत जनता तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । प्रदेशको जनसङ्ख्या ४४ लाख ५८ हजार २ सय ५२ रहेको छ । यसमध्ये महिलाको जनसङ्ख्या धेरै छ । ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । यस प्रदेशको जनसङ्ख्या कुल देशको १७ प्रतिशत हो ।
प्रदेशमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत कृषियोग्य जमीन छ । यसमध्ये ४९ प्रतिशत जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसका ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्या नगरपालिकामा बसोबास गर्दछन् । यस प्रदेशमा ९ सय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । तराईका जिल्लामा बैङ्कहरू बढी र पहाडी जिल्लामा कम छन् ।
१० लाख जनसङ्ख्या सहकारीमा आबद्ध छन्, जसमध्ये ६ हजारले रोजगारी पाएका छन् । २ सय २६ अर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको छ । यस प्रदेशमा ९ सय उद्योग रहेका छन्, जसमा ४० हजारले रोजगारी पाएका छन् । धेरै उद्योग भएको प्रदेशमध्ये यो प्रदेश दोस्रोमा पर्छ । यहाँका ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खानेपानी पुगेको छ । ६२ प्रतिशत घरधूरीमा विद्युत्को पहुँच छ ।
पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलगायत केही जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । मानव विकास सूचकाङ्कमा यस प्रदेशको अवस्था शून्य दशमलव ४६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा ५ हजार ८ सय विद्यालय छन् भने १३ लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । त्यसैगरी, १ सय २४ प्राविधिक कलेज रहेका छन् । प्रदेशको साक्षरता ६५ प्रतिशत छ । १० जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भएका छन् । कपिलवस्तु र बाँके पूर्ण साक्षर हुने तयारीमा छन् ।
यहाँ ७ सय ५२ ओटा स्वास्थ्य संस्था छन् । यस प्रदेशको औसत आयु ६७ वर्ष रहेको छ । राष्ट्रिय औसत आयु ६८ दशमलव ८ रहेको छ । पर्यटनको प्रचार सम्भावना यस प्रदेशमा छ । पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य लुम्बिनीलाई लिइएको छ । यहाँ वार्षिक १३ लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेका छन् ।
यस प्रदेशको बजेट आज शुक्रवार ल्याइँदै छ । यस प्रदेशको बजेट १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ । उक्त बजेट मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री मातहत रहेकाले बजेट पनि मुख्यमन्त्रीले नै ल्याउन लागेका हुन् ।